Isla-egta Jiritaanka! – Kaasho Maanka
Maalin aanan sidaas usii fogayn ayaan nin ahlul-diin ah oo aan su’aalo iswaydaarsanaynay ku iri; sida kali ah ee ay isla-egta (equation-ka) jiritaanku (existence) ku suuroobi karayso waa in ay la ekaataa eber (zero.) Ninkii inta uu qoslay ayuu yiri, ma wax jira oo aan aragno ayaad leedahay waxa ay la ekaan karaan eber? Deetana yasmo iyo jeesjees baa xigay. Aniga oo u duurxulaya, doonayana in aan wax dareensiiyo ayaan ku iri, oo waxa aad isla-eg iskuulka kusoo dhigatay – haddiiba aad soo dhigatay – soo eber lama aysan ekayn; isla-egta saableyda, isla egta xoogagga, isla-egta qulqulka danabka iyo wixii la hal-maala? Jawaabtiisu waxa ay ahayd mid u badan maya iyo markaas waa arrin kale.
Dadku aragtida ay eber ka haystaan iyo turjumaadda luuqaad ahaaneed oo ay u xambaariyaan waa ay ka duwantahay doorka ay eber ku leedahay nolosha, cilmiga iyo jiritaankaba. Wax kasta oo isla-eg gali kara waa hubaal waxa ay la mid noqonayaan eber. Waxbaa eber la mid ah haddii aad maqasho, kama dhigna waxba ma jiraan. Wuxu ayaga oo jira ayay haddana eber la mid noqon karaan. Sidaasi daraadeed, isla-egta jiritaanku waxa ay la mid tahay eber. Haddii isla-egta jiritaanku aysan eber la mid noqon, markaasi jiri mayso isku dheeli-tirnaan, jiritaankuna suurageli mayo.
Xilli ay meel adag maraysay doodda ah, maxay wax u jiraan, halkii ay ahayd in aysan waxba jirin? Iyo sidee ayuu illaah laftigiisu wax la’aan uga abuuray wax mise waligeed iyo waaqeedba waxbaa jiray? Ayuu xisaabyahan, haddana wadaad diimeed Talyaani ahaa oo lagu magacaabo Grandi isku dayay in uu xisaab ahaan kusoo dhiraandhiriyo sida uu illaahay eber uga abuuri karay wax sanadkii 1703-dii. Dhiraandhirintiisa oo dheerayd, haddana silloonayd marka loo eego xeerarka aritmatigga, buu ugu dambayn kusoo afmeeray in 0=1 asaga oo yiri sidaas Illaah baa ka dhigay. Grandi waxaa lagu xasuustaa taxanaha tirobeelka ee loogu magac daray ee loo yaqaanno Taxanaha Tirobeelka Grandi.
QORMO LA XIRIIRTA: Covid-19 wuxuu si dhaba u karbaashay diimihii dunida
Dadka ay diintu madax martay waa ay dhayalsadaan jiritaanka oo waxa ay awoodda iskugu geeyaan illaahay, ayaga oo illaahay usoo qaata inuu yahay fal-sameeye (faacil) waxa la garan waayaba qabta, balse waxa ay ilowsanyihiin in jiritaanka laftigiisu uu ka cajiibsanyahay illaahay. Jiritaan la’aantiis illaahay fal-sameeye ah ma jiri lahayn!
Guuxaaga iyo Garashada Qaldan
Sida wadaadadu sheegeen ama qaacidooyinka ay u dajiyeen gaalnimada anigu iyada ruuxeeda ayaan ku gaaloobay hasayeeshee in aan ilaahay agtiisa gaal ka ahay aniga iyo isaga kaliya unbaa og.Waxa aan rumeysanahay in Ilaahay rumeyntiisa la isaga dayan sidaas daraadeed ayaan diidanahay in qofku rumeeyo wax aanuu aqoon u laheyn oo rumeynta alle la mid tahay sida adiga oo shaqa lasoo bandhigay CV u...
Muhiim ma tahay inaan fekerno bulsho ahaan iyo shakhsi ahaanba? Haddii aan fekerka iska dayno sida xoolaha u noolaano soo nafis iyo nasteexo maaha? Waxaa hubaal ah in suaalahaas dadka badankooda jawaab “HAA” ah bixin doonaan waayo bulsho kasta waa inay fekertaa si ay u noolaato. Haddii aan maanta caagad shanlay caano ah suuqa geeyo oo 5 galaan midba siiyo 8 kun oo shillin iyo haddii aan...
W/Q: Gallad Gurxan 28th August 2020